Howlgalkii Hotel Maka Almukarrama oo lasoo afjaray – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Ciidamada amaanka Soomaaliya ayaa soo afjaray howlgal howlgal milateri oo shalay galab, xalay iyo saaka ka wadeen hotelka Maka Almukarrama oo Alshabaab qabsadeen kadib markii ay ku qaadeen weerar is qarxin iyo toos isugu jiray.
Weerarka ay Al-shabaab ku qabsatay hoteelka ayaa billowday gellinkii dambe ee shalay oo Jimco ahayd, isagoo tan iyo xalay socday.
Ciidanka booliska qeybtiisa miinada baarta ayaa gudaha u galay hoteelka, kaddib markii ay ciidanka hay’adda NISA ay toogteen qofkii ugu dambeeyay kooxdii hubeysneyd ee Hotelka ku jiray, sida laamaha amaanku sheegeen.
Howlgalkaan ayaa intii uu socday waxaa ku dhintay 11-qof sida ay laamaha amniga DFS qaarkood u sheegeen qaybaha kala duwn ee warbaahinta, iyadoo dhaawacyadu ay 20-qof kor u dhaafayan.
Weli dowladda Soomaaliya kama bixin wax faahfaahin ah weerarkii ka dhacay hotelka Maka Almukarrama iyo inta khasaaruhu la egyahay.